tourism development bank(tourism development bank) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
टुरिजम बैंकले बोलायो साधारणसभा, साढे ९ महिनादेखि रोक्का सेयर कारोबार कहिले खुल्ला ?
काठमाण्डौ । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमीटेडले आगामी मंसिर ४ गते सातौं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । करिब साढे ९ महिनादेखि अड्किएको मेगा बैंकसँगको मर्जरलाई टुंगोमा पुर्याउने प्रस्तावसहित साधारणसभा आह्वान भएकोले लामो समयदेखि अन्यौलमा परेका लगानीकर्ताले चाँडै राहात पाउने संभावना बढेको छ । टुरिजम र मेगा बैंकबीच २०७३ माघ ६ गते...
टुरिजम बैंकबाट बाढीपीडितलाई १२ लाख सहयोग
काठमाण्डौ । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले तराई-मधेश क्षेत्रका बाढी तथा डूूबानपीडितका लागि १२ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहात कोषमा जम्मा हुने गरी प्रदान गरेको छ । बैंक र कर्मचारीको तर्फबाट गरी रु. १२ लाख रुपैयाँको चेक आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । चेक बैंकका...
टुरिजम बैंकमा पनि अनलाइन आस्वाको सुविधा
काठमाण्डौ । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले धितोपत्र दरखास्त संकलन सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि अनलाइन आस्वा प्रणालीको सुरुवात गरेको छ । धितोपत्रको सार्वजनिक निश्कासन कार्यलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले सहज रुपमा धितोपत्र खरीद गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने उद्देश्य रहेको यस प्रणालीमा, टुरिजम बैंकमा खाता...
टुरिजम बैंकको सेयर सस्तोमै उठाउने अवसर गुमाउनुहोला नि
काठमाण्डौ । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले बिक्री नभएको ७ लाख ४ हजार कित्ता सेयर बोलकबोलबाट बिक्री खुलाएको छ । यो बैंकले साधारणतर्फ २ लाख ६६ हजार ५ सय ३७.२० कित्ता र संस्थागतर्फ ४ लाख ३८ हजार २००.८० कित्ता सेयरको लिलामीमा बुधबारदेखि आवेदन खुलाएको हो । यो बैंकले १ बराबर १ को अनुपातमा गत चैत १३ गते हकप्रद निश्कासन गरेको थियो । निश्कासित...
आयो दुई विकास बैंकको सेयर सस्तोमै उठाउने अवसर
काठमाण्डौ । दुुई विकास बैंकको सेयर सस्तोमै उठाउने हो ? हो भने तपाईले बुद्धिमता प्रयोग गरी उनीहरुले निकालेको लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नुुभयो भने ती बैंकका सेयर सस्तोमै प्राप्त गर्न सकिन्छ । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक र देवः विकास बैंक लिमीटेडले बिक्री नभएका सेयर लिलामीबाट बिक्री गर्ने सूचना निकालेका हुन् । टुरिजम डेभलपमेन्ट...
कलंकीमा टुरिजम बैंकको शाखा
काठमाण्डौ । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले कलंकीमा शाखा बिस्तार गरेको छ । हालै संचालनमा आएका ७ शाखामध्ये कलंकी शाखा पनि एक हो । यो शाखाको औपचारिक उद्घाटन बुधबार एक कार्यक्रमबीच नेपाल राष्टबैंकको डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले उद्घाटन गरे । कलंकी शाखासहित यो बैंकको शाखा संख्या २९ पुुगेको छ । बैंकको एक एक्सटेन्सन काउण्टर समेत...
इटहरीमा टुरिजम बैंक
काठमाण्डौ । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमीटेडले सुनसरीको इटहरीमा शाखा बिस्तार गरेको छ। आइतबार एक औपचारिक कार्यक्रममार्फत इटहरीमा नयाँ शाखाको औपचारिक सुरुवात गरिएको हो । इटहरीको शाखाको उद्घाटन नेपाल राष्टबैंक क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका निर्देशक रामुु पौडेल र इटहरी उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेशकुमार बिष्ट तथा...
शाखा बिस्तारमा टुरिजम बैंक आक्रामक, एकसाथ ३ शाखा बिस्तार
काठमाण्डौ । टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले एकसाथ तीन ठाउँमा शाखा बिस्तार गरेको छ। यो बैंकले चैत ७ र ८ गते नवलपरासीको रजहर, रुपन्देहीको बुटवल र बाँकेको कोहलपुरमा आफ्ना शाखा उद्घाटनसँगै सेवा संचालनमा ल्याएको हो । बैंकका अनुसार चैत ७ गते रजहर र बुटवल तथा ८ गते कोहलपुरको शाखा उद्घाटन गरिएको थियो । रजहर शाखाको उद्घाटन देबचुली उद्योग...
मुसहरको घर निर्माणमा टुरिजम बैंकको ५ लाख सहयोग
काठमाण्डौ । टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले स्थापनाको साताँै बर्ष पूूरा गरी आठौँ बर्ष प्रवेशको अवसर पारेर तेस्रो एकीकृत नमुना मुसहर वस्ती निर्माणको घोषणा गरेको धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनलाई ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बैंकले दिएको जानकारी अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत फाउण्डेसनलाई आर्थिक सहयोग गरिएको हो । मानवता र...
चैत १३ गतेदेखि टुरिजम डेभलपमेन्टको सतप्रतिशत हकप्रद
काठमाण्डौ । मेगा बैंकसँग मर्जरको प्रक्रियामा रहेको टुुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले अपाm्ना सेयरधनीका लागि आगामी चैत १३ गतेदेखि एकसय प्रतिशतको दरले हकप्रद निश्कासन गर्ने भएको छ । एक सूचना प्रकाशित गर्दै यो विकास बैंकले हकप्रदका लागि आवेदन दिने मिति चैत १३ गतेदेखि ३५ दिनसम्म अर्थात बैशाख १७ गतेसम्म तोकिएको छ । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले १...
टुरिजम बैंकलाई सत्प्रतिशत हकप्रद निश्कासनको अनुमति
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मेगा बैंकसँग मर्जरको प्रक्रियामा रहेको टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकलाई सतप्रतिशत(१ बराबर १)को दरले हकप्रद निश्कासनको अनुमति दिएको छ । राष्ट्रिय स्तरको यो विकास बैंकले अब १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको कुल ९७ लाख मूल्यको ९१ लाख ९७ हजार ७ सय १२ कित्ता हकप्रद निश्कासन गर्नेछ । यो बैंकको हकप्रद निश्कासन तथा...
एकसाथ टुरिजम बैंकको ७ शाखा संचालनमा
काठमाण्डौ । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल बिस्तारको कार्यलाई तीव्र पारेको छ । यो क्रममा उसले माघ २७ गतेदेखि देशका विभिन्न ६ स्थानमा एकसाथ शाखा संचालन गरी आफ्नो सेवा बिस्तार गरेको छ । माघ २७ गते इटहरी, हेटौडा, बुटवल, रजहर, कोहलपुर र कालीकोटमा गरी ६ स्थानमा नयाँ शाखा एकसाथ संचालनमा ल्याइएको बैंकले जनाएको छ । यस्तै, बैंकले माघ...
टुरिजम बैंकले कसरी गर्यो यति लोभलाग्दो प्रगति ?
काठमाण्डौ । हालै मेगा बैंकसँग मर्जरमा जाने सम्झौता गरेको टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमीटेडले चालुु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा खूद नाफातर्फ कमालको प्रगति हासिल गरेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ७ करोड १९ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको बैंकले यो वर्ष १०३ प्रतिशतले बढाएर १४ करोड ६३ लाखको उचाईमा पुर्याएको हो । बैंकले रिजर्बलाई समेत १९२...
मेगा र टुरिजम बैंक मर्ज हुने, स्वाप रेसियो १००ः९५ तय
काठमाण्डौ । मेगा बैंक लिमीटेड र राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जरमा जाने सम्झौता भएको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको चुक्तापूँजी वृद्धिको नीतिगत व्यवस्था गरेअनुसार वाणिज्य बैंकले २०७४ असार मसान्तभित्र ८ अर्ब पूँजी पुर्याउनुपर्छ । यही बाध्यताका कारण तोकिएको...
काठमाण्डौ । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले १ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको मातृभूमि विकास बैंक लिमिटेड र ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको कालिञ्चोक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति पश्चात टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको नामबाट आइतबारदेखि विधिवत रुपमा एकीकृत कारोबार प्रारम्भ गरेको छ । एकीकृत कारोबारको शुभारम्भको औपचारिक उद्घाटन...